Abakhiqizi Bemikhiqizo , Abahlinzeki - Imboni Yemikhiqizo YaseChina
Izici ze-MSC 41 SERIES BLACKSMITH POWER HAMMER
Izici ze-ERW/HFW TUBE MILLS
Izici ze-HYDRAULIC AUTOMATIC PUNCHING MACHINE
Izici Zokwakheka Okuqondile ku-Square Tube Mill
Lo mshini ungasika insimbi ye-engeli, insimbi yesiteshi, i-C beam, i-I beam, i-T beam, ipuleti lensimbi, insimbi eyindilinga, insimbi yesikwele njll.
Uhlelo olulawulwayo lwe-torsion kanye nomshini wokusonta lwenzelwe ukusonta izinto zensimbi zokuhlobisa.Lo mshini wokusonta ibha yensimbi usetshenziswa kabanzi emkhakheni wokwenza insimbi eyenziwe.Uhlelo lwe-HBMS lwensimbi olusebenzayo olulawulwayo lwe-torsion nomshini wokusonta lungasonta insimbi eyisikwele, insimbi eyindilinga kanye neshubhu yesikwele.Imikhiqizo yayo ingasetshenziswa ukuhlobisa amafasitela, izindonga, iminyango kanye nothango njll. Uhlelo olulawulwayo lwe-torsion and twist machine lungenye yemishini yethu yensimbi eyenziwe yokuhlobisa.Ithole ukudayiswa okuhle emakethe yamazwe ngamazwe, futhi lo mshini wamukele kabanzi emazweni amaningi, njenge-United States, United Kingdom, Canada, Colombia, Algeria njll.
Umshini wokwakha i-MS-DY16 hydraulic, ungakhama insimbi eyisikwele ewugqinsi, insimbi eyindilinga, insimbi eyisicaba, ipayipi eliyisikwele, ipayipi eliyindilinga libe imihlobiso yensimbi yemibuthano ehlukahlukene, ama-arcs, amakhona kanye nokwakheka okukhethekile ngesikhathi esisodwa.Ngokusebenza kahle kokukhiqiza okuphezulu nokuvumelana okuphezulu kwezingxenye zokuhlobisa, iyithuluzi elifanele lensimbi eyenziwe, umhlobiso, imboni yefenisha, imboni yengadi kanye nemboni yezokwakha.
Uhlobo lwe-MS-WZP lwemishini yokushisa yokungenisa imvamisa ephezulu kakhulu
I-MS-WZP yohlobo lwe-ultra-high frequency induction imishini yokushisa isebenzisa isimiso se-resonance, pulse
ubuchwepheshe bokulawula imvamisa kanye nezinto zokushintsha ngesivinini esikhulu.Isekhethi eyinhloko isetshenziswa
Amadivayisi e-IGBT, ashintsha ngokuyisisekelo indawo yokushisa ye-electronic oscillation emakethe.
123456Okulandelayo >>> Ikhasi 1/109